Umthamo wamanzi wamadoda aqhelekileyo umalunga ne-60%, umxholo wamanzi amabhinqa yi-50%, kwaye umxholo wamanzi eembaleki ezikumgangatho ophakamileyo usondele kwi-70% (kuba umxholo wamanzi esihlunu uphezulu njenge-75% kunye nomxholo wamanzi Amanqatha ayi-10% kuphela). Amanzi lelona candelo libalulekileyo legazi. Inokuhambisa izakha-mzimba, ioksijini, kunye neehomoni kwiiseli kwaye isuse imveliso ye-metabolism. Ikwalicandelo eliphambili kulawulo lobushushu bomzimba womntu. Amanzi kunye nee-electrolyte zithatha inxaxheba kulawulo loxinzelelo lomntu lwe-osmotic kunye nokugcina ukulingana komzimba womntu. Ke indlela yokugcwalisa ngokufanelekileyo amanzi ngexesha lokuzilolonga yikhosi esisinyanzelo kubo bonke abakhweli.
Okokuqala, sukulinda ukusela amanzi ude unxanwe. Kuphantse kube nzima ukuba abantu bathathe amanzi aneleyo ukugcina ulungelelwaniso lwamanzi omzimba ngexesha lokuzilolonga. Ukuphulukana namanzi emzimbeni ngexesha lokuzilolonga ixesha elide kuya kukhokelela kuxinzelelo lwe-osmotic ephezulu yeplasma. Xa siziva sinxaniwe, umzimba wethu sele ulahlekile kangange-1.5-2L yamanzi. Ngokukodwa ukhwele kwindawo enomswakama kwaye eshushu yehlobo, umzimba uphulukana namanzi ngokukhawuleza, ukhawulezisa umngcipheko womzimba wokuphelelwa ngamanzi emzimbeni, oya kuthi ukhokelele ekunciphiseni kwegazi, ukunciphisa ukubila, kunye nokubetha kwentliziyo ngokukhawuleza, okukhokelela ekubonakaleni kwangoko ukudinwa. Kunokubakho ne-angina pectoris esongela ubomi. Ke ngoko, ukuhamba ngebhayisikile ehlotyeni ukugcwalisa amanzi akunakuhoywa. Ngaba unesibindi sokungahoyi ukubaluleka kokusela amanzi ngeli xesha?
Ke indlela yokusela amanzi ichanekile? Naxa ungaqalanga ukukhwela, kufanelekile ukuba uqale usele amanzi ukugcina ulungelelwano lwamanzi emzimbeni. Kuthatha ixesha elincinci ukuba amanzi aselwe ngexesha lokuhamba ngebhayisikile ngumzimba wethu, kwaye ixesha elide kakhulu lamanzi okusela linokubangela ukuba amanzi omzimba awile, ukuze angabinakufakelwa umbane ngokupheleleyo. Amanzi okusela kuphela xa unxaniwe uya kuwushiya umzimba wakho ukwimeko yokunqongophala kwamanzi ixesha elide. Ke kucetyiswa ukuba kugcwalise amanzi rhoqo kwimizuzu eli-15 xa ukhwele ehlotyeni elishushu. Ukuba luqeqesho oluphakathi ukuya phezulu, kuyacetyiswa ukuzalisa amanzi kube kanye kwimizuzu eli-10. Inani elincinci kunye namaxesha amaninzi. Ke ngoko, kuya kufuneka uzise into ephathekayoIbhotile yezemidlalo okanye ibhegi yamanzi xa ukhwele ngaphandle. Imveliso ekulula ukuyisebenzisa ikuvumela ukuba uzalise amanzi nanini na kwaye naphi na ngexesha lomsebenzi, kwaye ayibangeli mthwalo kuwe.